Qaabka Ay U Dhaceyso Doorashada Dowlad Goboleedka Galmudug Oo La Soo Saaray – Radio Muqdisho
Qaabka Ay U Dhaceyso Doorashada Dowlad Goboleedka Galmudug Oo La Soo Saaray
Iyadoo 4-ta bishan July lagu wado in magaalada Cadaado ay ka dhacdo doorshada madaxweynenimo ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa gudiga doorshada waxaa ay soo saareen qaabka ay u dhici doonto doorshadaasi oo si weyn loo sugayo.
Juneyd Ismaaciil Cigale oo ka mid ah guddiga Farsamada ee maamul u sameynta gobolada dhexe oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in kama dambeys maanta in ay ku egtahay qabashada taariikh nololeedka musharixiinta ku baratamaya xilka madaxtinimo ee Dowlad goboleedka Galmudug, waxaana intaasi kaddib uu tilmaamay in musharixiinta in ay jeedin doonaan khudbadahooda ku saabsan waxa ay qaban doonaan hadii la doorto.
Juneyd oo sii hadlay ayaa sheegay in guddiga Xildhibaannada ee u xilsaaran doorashada in ay soo saareen wareega koowaad ee doorashada dowlad goboleedka Galmudug ee 4 July lagu wado in ay dhacdo musharixii hela hal cod dheeri ah, uu noqon doono Madaxweynaha Dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug.
Magaalada Cadaado ayaa waxaa ka socdo ololo balaaran oo ku aadan doorshada xilka Madaxweynenimo ee Dowlad goboleedka Galmudug, waxaana mashquul aad u badan oo arinkaasi ku saabsan uu hareeyay hotelada halkaasi ku yaala, waxaana waxa la dhowraa ay tahay doorashada hal maalin kaddib ka dhici doonto Cadaado oo isha lagu hayo cida ku soo bixi doonta.
Madaxweynaha Dalka Oo Shahaado Sharaf Guddoonsiiyay Taliyaha Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed